တံဆိပ်တုံးထုခြင်း Terminal တံဆိပ်တုံးထုခြင်း Terminal မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Tong Na Enterprise Co., Ltd. နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် တံဆိပ်တုံးထုခြင်း Terminal, စက်ရုံ Taiwan။ အခွက်အမျိုးမျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း၏အခြေခံတွင်, စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအရည်အသွေး၌စိတ်ဝိညာဉ်အား, ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုမှုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကျွန်တော်တို့၏အကွယ်အကာအဖြစ်ကြည်ဖြူနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်များကိုပေး, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့် delivery ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရည်အသွေးကထိန်းချုပ်ထားသည် တိုင်းဖောက်သည်များအတွက်။ ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, နာမည်ကောင်းကိုစောင့်ပါမည်။ ပြည်တွင်းနှင့် overseas'friends ထံမှအဖိုးတန်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုခံယူခြင်းငှါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီပူပွဲချင်းပြီး၌ကောင်းသောအောင်မြင်မှုများကိုဖန်တီးရန်နှင့်အတူတကွanice မနက်ဖြန်ထွက်မသွားပါစေနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှအကောင်းဆုံး တံဆိပ်တုံးထုခြင်း Terminal နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်တွင်အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးသည်ဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖောက်သည်များအားကတိမပေးပါ။ ကျနော်တို့ကတိတစ်ခုပြီးတာနဲ့ကုန်ကျစရိတ်မခွဲခြားဘဲအားလုံးထွက်သွားရမယ်။ ဖောက်သည်ကငါတို့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကို ဦး စားပေးပြီးဖောက်သည်များနှင့်အတူအဝေးရောက်လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အားကိုးပြီးမှီခိုအားထားရသောရေရှည်အရေးကြီးသောမိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်အကောင်းဆုံးသောထုတ်ကုန်များနှင့်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းသင့်အားအာမခံပါသည်။
Computer connector အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။-ထုတ်ကုန်ရောင်း,အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ရုံကြီးတွေ သုံးတယ်။,အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။,ထုတ်ကုန်မျိုးစုံ.
ပို့ဆောင်မှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/stamping-terminal.html
အကောင်းဆုံး တံဆိပ်တုံးထုခြင်း Terminal ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် တံဆိပ်တုံးထုခြင်း Terminal မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
Computer connector အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’ပူပူနွေးနွေး-ထုတ်ကုန်ရောင်း,အီလက်ထရွန်းနစ်ကုမ္ပဏီကြီးများသို့ ထောက်ပံ့ပေးသည်။.ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသသုံးအတွက်သာမက,အခြားဒေသများသို့လည်း တင်ပို့သည်။. 436 အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ,ဆက်သွယ်ရန် 15 Pin,၀ယ်တယ်။.71*10.23mm လျှပ်စစ်ပစ္စည်း,ကွန်ပျူတာ,မိုဘိုင်းဖုန်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ငွေပေးချေမှု TT45~ရက် 60 ဖောက်သည်အတိုင်းထုတ်လုပ်ပါ။’s ပုံဆွဲလိုအပ်ချက်များ,အပြောင်းအလဲနဲ့ ဒီဇိုင်း,၂.5D တိုင်းတာခြင်း။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး,စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာပေးနိုင်သည်။ ပစ္စည်း:အလွိုင်းကြေးနီ ISO90001 TS16949 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Computer connector အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’လူကြိုက်များသော ထုတ်ကုန်များကို စျေးကွက်တွင် အဓိကအမှတ်တံဆိပ်များက အသုံးပြုကြသည်။.ပြည်တွင်းဖောက်သည်များအပြင်,၎င်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့လည်း တင်ပို့သည်။. 209 အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ,454 အပိုင်း,၂.2*3.4mm မိုဘိုင်းဖုန်း,ကွန်ပျူတာ,အီလက်ထရွန်းနစ်ဆက်စပ်စဉ်ဆက်မပြတ်တံဆိပ်ထုအစိတ်အပိုင်းများ. ပမာဏပေါ်မူတည်၍ ငွေပေးချေမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုစည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။. ပုံနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်ပါသည်။.နမူနာများပေးနိုင်ပါသည်။.စဉ်ဆက်မပြတ်မှိုလျင်မြန်စွာအပြောင်းအလဲနဲ့,၂.5D တိုင်းတာခြင်း။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး,အမြန်ထုတ်လုပ်မှု. ပစ္စည်းမှာ မီးစုန်းကြေး ISO9001 TS16949 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်တွင်ပြုလုပ်သည်။
Computer connector အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။-ထုတ်ကုန်ရောင်း,အီလက်ထရွန်နစ် စက်ရုံကြီးတွေဆီ ပို့ပေးတယ်။,အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ 588 အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ,Micro Connector Plug Ground Contact,၁၀.86*13.75mm ကွန်ပြူတာများ,မိုဘိုင်းဖုန်းများ,အီလက်ထရွန်းနစ်စဉ်ဆက်မပြတ်သေဆုံးတံဆိပ်ထုအစိတ်အပိုင်းများ ပို့ဆောင်မှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ နမူနာ သို့မဟုတ် ပုံများအတိုင်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။,နမူနာများကို ပေးနိုင်ပါသည်။,ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း။,အမြန်နှင့်တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှု ပစ္စည်းအလွိုင်းကြေးနီ TS16949 ISO90001 Certify နှစ်မျိုးလုံး 8)ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန်